Thwebula CheMax 19 – Vessoft
CheMax – isofthiwe compact nge database enkulu CHEATS ukwenza lula ukudlula imidlalo computer. Isofthiwe ikuvumela ukungena amakhodi kanye amaphasiwedi in imidlalo athandwayo noma kusebenze kuzo usebenzisa inhlanganisela yokhiye. CheMax Imidlalo kwenza ukucinga imidlalo ngegama noma ohlwini sakhiwa alfabhethi. Isofthiwe njalo ilungisa database imidlalo ehlukene futhi ikuvumela ukuba uzitholele noma ukusindisa aphambe amafayela. Isofthiwe has a esibonakalayo elula futhi enembile.
Inani elikhulu ukukopela-amakhodi
Kungenzeka ukuba unyatheliswe futhi sigcine ukukopela-amakhodi amafayela
izibuyekezo database Regular
Amazwana on CheMax:
CheMax Ahlobene software:
Imidlalo The khulula umdlalo card uhlobo zendlela. Umdlalo has a isethi lamakhadi imilingo kanye heroes edume wendawo yonke Warcraft.
English, Français, Español, Deutsch... Dolphin 4.0.2 futhi 4.0.8700 rc
Imidlalo Ithuluzi yakhelwe ukumisa hotkeys. Isofthiwe ikuvumela ukuba iqaphe ukuchofoza izinkinobho on the keyboard, ukunyakaza igundane kanye nomsebenzi kwamanye amadivaysi yokulawula.
Ukungena kokukude Isofthiwe for the ukufinyelela idatha nekhompyutha noma idivaysi akude. Isofthiwe isebenzisa izinyathelo elawula ukulondeka ukubethela ukuvikela idatha.
Akwazi ukugcina Amafayela Isofthiwe uvumela ukuba isipele futhi ubuyisele uhlelo lokusebenza, nama-hard drive noma ngodonga futhi ukufaniswa the izindilinga eziyizicaba ngaphandle kokudala ifayela lesithombe.
English, Français, Deutsch, 中文... IETester 0.5.5